सरकारले यो वर्षदेखि धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको थियो तर प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार विगतभन्दा यो वर्ष झन् धान उत्पादनमा कमी आएको छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि झण्डै १० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यक पर्दछ । गत साल ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यसको उत्पादनमा वृद्धिका लागि ‘धानजोन’ तथा ‘सुपरजोन’ को व्यवस्था पनि गरेको छ । धानका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ तैपनि उत्पादनमा किन कमी आएको छ त ? यिनै विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीसँग गोरखापत्रका लागि सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानी :